कोरोना परीक्षण : कोशीमा पोजेटिभ, प्रदेश ल्याबमा नेगेटिभ ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना परीक्षण : कोशीमा पोजेटिभ, प्रदेश ल्याबमा नेगेटिभ !
२४ साउन, विराटनगर । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि विराटनगर महानगरपालिका-१० का ६३ वषर्ीय रमेश अग्रवालले बिहीबार कोशी अस्पतालको फिबर क्लिनिकमा गएर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षणका लागि स्वाब दिए ।
कोशीको रिपोर्ट नआउँदै स्वास्थ्य गम्भीर बन्यो । आफन्तले शुक्रबार वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रठिष्ठान धरान पुर्‍याए । धरानले पनि उनको स्वाब संकलन गर्‍यो । मृगौलासम्बन्धी समस्या देखिएका अग्रवालको उपचारका क्रममा मृ´त्यु भयो ।